နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၈) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 10, 2014 at 16:10 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီနေ့အပိုင်းမှာ စားသောက်ဆိုင်မှာ အစားအစာတွေကို မှာရာမှာ ပြောတဲ့ စကားပြောတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Waiter : Are you ready to order now, sir?
Ralph : Yes. I'll have tomato soup, roast beef, mashed potatoes, and peas.
Waiter : That's tomato soup…, roast beef.. . Mashed potatoes ... And peas. How do you want the beef—rare, medium, or well done?
Ralph : Well done, please.
Waiter : Anything to drink?
Ralph : Hmmm .. . Just water. I'll have coffee with my dessert.
အပေါ်က dialogue မှာ ဘာသတိထားမိသလဲ? Subject တွေ verb တွေ ဖြုတ်ပြောတာ သတိထားမိလား။ Natural conversation မှာ information အပြည့် ပြန်ပြန်ပြောရင် သဘာဝ မကျဘူး။ လိုအပ်တဲ့ information ကိုဘဲ ပြောတာသဘာဝကျတယ်။
I'll have tomato soup, roast beef, mashed potatoes, and peas.
အခုလို အမယ်တွေ တန်းစီ ပြီးရွတ်ပြတဲ့အခါ item တစ်ခုချင်းစီရဲ့ နောက်ဆုံး syllable တိုင်းမှာ stress ထည့်ပြောရတယ်။
ဒီမှာလည်း အစားအသောက် နဲ့ တွဲပြောတဲ့ idiom က have ဖြစ်တယ်။ take တို့ eat တို့ မသုံးဘူး။ Waiter က လည်း တစ်ခုချင်း ဖြေးဖြေး ရွတ်သွားပြီး (အပေါ်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်း item တစ်ခုချင်းစီရဲ့ နောက်ဆုံး syllable တိုင်းမှာ stress ထည့်ပြောကာ) အော်ဒါစာရွက်မှာ ရေးမှတ်နေတယ်။
ဒီမှာတော့ ပြောတဲ့အခါ ရှေ့က ၂ လုံး အပေါ် intonation အသံမြှင့်ပြောကာ နောက်ဆုံး အလုံး အပေါ် အသံပျော့ပျော့နဲ့ ပြောရတယ်။
rare = slightly cooked ကျက်တယ်ဆိုရုံဘဲ ချက်ထားတာ
medium= မကျက်တစ်ကျက် ချက်ထားတာ
အောက်မှာဖော်ပြတာတွေကတော့ natural conversation ဖြစ်တဲ့အတိုင်း subject တွေ verb တွေ ဖြုတ်ပြောတာ တွေ့ရပါတယ်။
Well done, please. (လိုအပ်တဲ့ information ကိုဘဲ ပြောတာ ။)
Anything to drink? (ဒီစကားကို sentence အပြည့်ပြောရင် Do you want anything to drink? Would you like anything to drink? Will you have anything to drink? စသဖြင့်ပြောနိုင်ပေမဲ့ လိုတဲ့ information ကိုဘဲပြောတယ်။)
Just water. (ဒီမှာsubject တွေ verb တွေ ဖြုတ်ပြောတယ်။)
တစ်ကယ်တော့ လိုအပ်တဲ့ အဖြေကိုဘဲ လိုတိုရှင်း ပြောတာ။ ကျန်တဲ့ အရာတွေ ကို context က ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာဘဲ။ structure ဖြုတ်ပြောလည်း အဓိပ္ပါယ်က ထွက်သကိုး။
I'll have coffee with my dessert.
ဒီနေရာ မှာ take တို့ drink တို့ မသုံးဘဲ have ကို သုံးရမယ်နော်။ ဥပမာ
I'll haveacoke. စသဖြင့်ပေါ့။
လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာရေးသူများအတွက် အကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ခြင်းဆ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာအရေးအသားပိုမိုကောင်းစေရန် အကြံပြုချက် (...